Ndị gọvanọ US na -anabata ịmalitegharị ókèala maka ndị ọbịa ọgwụ mgbochi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ndị gọvanọ US na -anabata ịmalitegharị ókèala maka ndị ọbịa ọgwụ mgbochi
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị gọvanọ US na -anabata ịmalitegharị ókèala maka ndị ọbịa ọgwụ mgbochi.
Gotù Gọvanọ Mba dị njikere ịrụ ọrụ na nchịkwa iji hụ na nchekwa na ahụike ụmụ amaala anyị na -aga n'ihu ka ha na -abawanye ọrụ akụ na ụba nke na -abịa njem na azụmaahịa.
Ngalaba nchekwa ala nke United States kwupụtara mmeghe nke ókèala US maka ndị ọgwụ mgbochi n'ọnwa na -abịa.
Ọtụtụ ndị gọvanọ US kwupụtara nchegbu ha na nchịkwa ahụ na mmetụta na -aga n'ihu nke mmachibido njem njem ókèala na ndị mebere ha.
Nkwuputa Tuesday bụ akụkọ ịnabata na usoro dị mkpa iji belata mmetụta akụ na ụba na obodo n'ihi COVID-19.
Taa, nke Gotù Gọvanọ Mba (NGA) nabatara ọkwa sitere na Ngalaba Nchekwa Obodo (DHS) na mmeghe nke oke ala US maka ndị a gbara ọgwụ mgbochi malite na ọnwa na -abịa.
N'oge ọkọchị a, ọtụtụ ndị gọvanọ kwupụtara nchegbu ha na nchịkwa maka mmetụta na -aga n'ihu mgbochi mgbochi oke na ndị mejupụtara ha - ọtụtụ n'ime ha bụ ndị nwe na ndị ọrụ nke obere, azụmaahịa ezinụlọ na -achọsi ike ịmaliteghachi ọrụ.
Nkwuputa Tuesday bụ akụkọ ịnabata na usoro dị mkpa iji belata mmetụta akụ na ụba na obodo anyị n'ihi COVID-19. NGA dị njikere ịrụ ọrụ na nchịkwa iji hụ na nchekwa na ahụike nke ụmụ amaala anyị na -aga n'ihu na -abawanye ọrụ akụ na ụba nke na -abịa njem na azụmaahịa.
Ọ bụrụ na a ga -enwerịrị mgbanwe n'ọdịnihu, ndị gọvanọ na -akpọku Gọọmentị ka ya na steeti na ókèala rụọ ọrụ iji hụ na ntuziaka amụma na -eburu n'uche mmetụta mpaghara na obodo.
Ntọala na 1908, na Gotù Gọvanọ Mba (NGA) bụ nzukọ mba abụọ nke Gọvanọ 55 nke mba ahụ. Site na NGA, ndị gọvanọ na -ekerịta omume kacha mma, na -eleba anya n'okwu gbasara mmasị mba na steeti wee kesaa ụzọ ọhụrụ na -akwalite ọchịchị steeti ma na -akwado ụkpụrụ nke gọọmentị etiti.